Ọtụtụ ndị njem nleta na-ahọrọ iji ememe ha na mba ọzọ. Ndị na-eme njem nleta bụ obere Republic of San Marino, ndị Italia gbara gburugburu n'akụkụ niile, bụ ndị a na-apụghị izere mmasị maka ụbọchị dum. Na mgbakwunye, ekele maka ụtụ isi pụrụ iche, a maara San Marino dị ka ụlọ ahịa Italian . A na-ekewa ókèala nke obodo Republic na mpaghara itoolu, nke ọ bụla nwere ebe o wusiri ike, n'etiti ya bụ isi obodo ya - obodo nke San Marino.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na San Marino bi n'obere ógbè (ihe dịka 61 sq. Km.), Ihe ndị dị ebube nke ihe owuwu na mpaghara ya na-egbuke egbuke na ịma mma ya. Ọbụna ihe ijuanya bụ ọnụ ọgụgụ nke ihe ncheta kwa mpaghara.
Kedu ihe ị ga-ahụ na San Marino?
Ụlọ elu dị na San Marino
Na mgbakwunye na ebe nkiri San Marino, ị nwere ike ịga n'ebe e wusiri ike, nke dị n'ugwu Monte Titano. Ebe e wusiri ike gụnyere ụlọ elu atọ:
Ụlọ elu nke Guaita bụ ụlọ kacha ochie, ebe e wuru ya na narị afọ nke isii. O nweghị ntọala ma dị na otu n'ime nkume dị nso n'obodo ahụ. Nzube mbụ ya bụ ịrụ ọrụ nchebe: ọ bụ ụlọ nche. Otú ọ dị, e mesịrị jiri ya dị ka ụlọ mkpọrọ.
Ka ọ dị ugbu a, Ụlọ Ọrụ Nkà Ọrụ na Ụlọ Nche na-echekwa ebe a.
Ụlọ elu nke abụọ - Chesta - dị 755 mita n'elu larịị. N'oge ọchịchị nke Alaeze Ukwu Rom, ọ bụ ebe a na-achọpụta ihe. E wuru mgbidi ya dị na 1320. Ruokwa na narị afọ nke 16, ọ nọgidere na-arụ ọrụ ya.
N'afọ 1596, a rụgharịrị ụlọ elu nke La Cesta.
N'afọ 1956, Ụlọ Elu ahụ kpuchiri Ebe Ndebe Ihe Agha Ndị Agha Oge Ochie, nke nwere ihe karịrị narị asaa na-egosi: ihe agha, ụda agha, égbè, na égbè ndị na-alụbeghị ọgụ na narị afọ nke 19.
Ụlọ elu nke atọ - Montale - wuru na narị afọ nke 14. Otú ọ dị, ọ gaghị ekwe omume ịga n'ime ya. Ndị njem nleta nwere ike ịmata ụlọ elu naanị site n'èzí, ebe ọ bụ na ụlọ elu mbụ abụọ ahụ ọnụ ụzọ ahụ bụ n'efu.
Museum of Tortura Della Tortura na San Marino
Nchịkọta nke ụlọ ihe ngosi nka nwere ihe karịrị otu narị ụdị ahụhụ dị iche iche, bụ nke e ji mee ihe n'oge Ọkachamara. Na ngwa ọ bụla a na-etinye kaadị na nkọwa zuru ezu nke usoro ọrụ ya. Egwuregwu niile nke ịta ahụhụ na-arụ ọrụ ma ọ bụghị nke mbụ anya dị ọcha ruo mgbe ị gụrụ ntụziaka ntụziaka nke a ma ọ bụ ngwá ọrụ ịta ahụhụ. Ihe ka ukwuu n'ime ihe ngosi ahụ ka e kere na narị afọ 15-17.
Site n'oge ruo n'oge, ụlọ ihe ngosi nka na-ekpuchi ngosi ngosi ndị a raara nye mba dị iche iche.
Ka o sina dị, ma e jiri ya tụnyere ụlọ ngosi ihe ngosi ndị ọzọ nke Europe, ọnọdụ ikuku ebe a adịghị ada ada.
Ụlọ ihe ngosi nka na-arụ ọrụ kwa ụbọchị site na 10.00 ruo 18.00, na n'August ọ na-arụ ọrụ ruo elekere 12 n'ehihie. A na-akwụ ụgwọ ọnụ ụzọ nke ụlọ ihe ngosi nka ma kwụọ ihe dịka $ 10.
Basilica del Santo ke San Marino
Baselica nke Santo Pieve (Saint Marino) e wuru na 1838 site n'aka onye na-ese ụkpụrụ ihe bụ Antonio Serra, bụ onye kpebiri ichota mpụta na ime ụlọ chọọchị ahụ dịka nchịkọta nke neoclassicism. Ndị dị na Kọrịnt na-anọ n'akụkụ ikuku na-ekpo ọkụ, site na nke mbụ ha hụrụ na ha na-akpali akpali.
A na-eji ihe oyiyi St Marino, nke onye na-akpụ akpụ Tadolini kere, wuru ebe ịchụàjà ahụ. N'okpuru ebe ịchụàjà a na-echekwa ihe dị iche iche nke Onye Nsọ ahụ.
A na-ewere ụka nke Basilica San Marino dịka ụlọ chọọchị kachasị mma n'ókèala nke mba ahụ.
San Marino bụ otu n'ime obodo kacha nta na Europe. Obere bụ nanị Monaco na Vatican. N'agbanyeghị na mba ahụ dị obere, ndị njem nleta si n'akụkụ ụwa nile bịa ebe a kwa afọ iji gaa na ebe ngosi ihe ngosi dị iche iche, ebe a na-emepụta ụkpụrụ ụlọ na ogige ntụrụndụ obodo.
Kedu ihe iji wetara na Vienna?
Anya nke Vityazevo
Anya nke Tartu
Obodo kachasịnụ n'ụwa
Enyemaka enyemaka mbụ na njem
Ebe nkiri na Helsinki na oyi
The Coliseum dị na Rom
Kedu otu esi ewu ụlọ ntu?
Budapest - ebe nkiri
Central Park na New York City
Innsbruck - akara ala
Livadia Obí na Crimea
Nwa ahụ nwere ụkwara na ọkụ
Stenezes na anya mmiri
Kedu otu esi mụta ịmegharị ụkwụ?
Nri mgbe amuchara nwa
Igwe ifufe ikuku
Pizza na ahịhịa
Nri ofe na poteto
Kedu ihe ị ga-ahụ na Chile?
Birch buds - ngwa
Mgbu na chocolate
Gini mere ichota di ichota?
Enwere ike ịsacha aji ahụ?
Seabass na foil
Ihe omume si na nke abụọ
Esi esi nri okroshka na kvass?